သမီးတွေကို ပျိုးထောင်လာရင်း သိမ်မွေ့သော သင်ခန်းစာတွေ ရရှိခဲ့ကြသော နာမည်ကျော်ဖခင် (၇) ဦး
Home Child Entertainment Celebrity Mom သမီးတွေကို ပျိုးထောင်လာရင်း သင်ခန်းစာတွေ ရရှိခဲ့သော နာမည်ကျော်ဖခင် (၇) ဦး
သမီးတွေကို ပျိုးထောင်လာရင်း သင်ခန်းစာတွေ ရရှိခဲ့သော နာမည်ကျော်ဖခင် (၇) ဦး
လေ့လာမှုတွေအရ ဖခင်နှင့် သမီးဖြစ်သူတို့ရဲ့ ကျန်းမာသောဆက်ဆံရေးတွေဟာ သမီးဖြစ်သူရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တန်ဖိုးထားမှုနှင့် ပညာရေးအောင်မြင်မှုတွေအပေါ် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိကြောင်း လေ့လာမှုတွေက ဖော်ပြကြပါတယ်။ ဖခင်ကိုယ်တိုင်က အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ရှုထောင့်အမြင်နှင့် ဘဝတွေကို တစ်ခါမှ မကြုံဖူးတာကြောင့် တစ်ခါတလေရှုတ်ထွေးနိုင်ပေမယ့် ဖခင်တွေက သူတို့ရဲ့ သမီးတွေကို အကာအကွယ်ပေးပုံနှင့် သမီးလေးတွေကလည်း သူတို့ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူကို ကြီးမားသော ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်လာသည်အထိ လုပ်နိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ ဖခင်နှင့် သမီးဖြစ်သူအကြား ခိုင်မြဲသောနှောင်ကြိုးတွေက ဂုဏ်ပြုဖို့ လိုအပ်သောရတနာတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် သမီးလေးတွေရဲ့ ဖေဖေဖြစ်ရခြင်းက လက်ဆောင်တစ်ခုပါလို့ ရင်ဖွင့်ကြတဲ့ နာမည်ကြီးဖေဖေတစ်ချို့ကို မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁။ Will Smith
စည်းကမ်းတင်းကြပ်သော ဖခင်တစ်ဦးနှင့် ကြီးပြင်းလာရသော ဟောလိဝုဒ်နာမည်ကြီးမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်သူ Will Smith သည် ပြင်းထန်သော စည်းကမ်းနှင့် ကြိုးစားအားထုတ်မှုကသာ အောင်မြင်မှုရရှိနိုင်သည်ဟူသော ဆောင်ပုဒ်ကိုသာ လိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သမီး Willow က သူမရဲ့ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကို ရပ်တန့်ပစ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ Will က ဒေါသတကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီး ဖခင်နှင့် သမီးနှစ်ယောက်အကြား အကြီးအကျယ်ငြင်းခုံမှုတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဖခင်ဖြစ်သူကို ဆန္ဒပြတဲ့အနေဖြင့် သူမရဲ့ ဆံပင်တွေကို ဖြတ်ပြီး ကတုံးရိတ်ခဲ့ပါတယ်။
Will Smith အတွက် သူဒီလို ကလေးတွေအပေါ် တင်းကြပ်နေခြင်းက သူတို့ကို အဝေးကို တွန်းထုတ်နေရုံသာဖြစ်တယ်ဆိုတာ နားလည်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး Will Smith က ကျွန်တော်တို့က ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေရဲ့ ဘဝထဲကို ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကို အတင်းဖိအားပေးနေမယ်ဆိုရင် ကလေးတွေက ကျွန်တော်တို့ကို မုန်းတီးနေတဲ့ လူဆိုးလေးတွေပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသင်ခန်းစာရခဲ့ပါတယ် ဟု ဝန်ခံခဲ့ဖူးပါတယ်။
၂။ Dwayne Johnson
The Rock သည် ၎င်း၏ သမီးသုံးယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ့ဘဝမှာ ဒီ့ထက်ပိုပြီး ဂုဏ်ယူစရာကိစ္စမဟုတ်တော့ဘူးလို့ လက်ခံထားသူမျိုးပါ။ ဖခင်များနေ့မှာ ၎င်းရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ * ယောင်္ကျားတိုင်းက သားလိုချင်သော်လည်း ယောင်္ကျားတိုင်းအတွက် သမီးတစ်ယောက် လိုအပ်တယ်* လို့ ပြောခဲ့ပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ သမီးတွေအားလုံးက ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော ညီမျှခြင်းတွေ ဖြစ်လာကြပါပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီဟောလိဝုဒ်စူပါစတားဟာ ၎င်းရဲ့ သမီးတွေကို ချစ်ကြောင်းဖော်ပြဖို့ ဘယ်တော့မှ တွန့်ဆုတ်မနေတတ်ပါဘူး။ ဒုတိယသမီးလေးရဲ့ လေးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ စတားကြီးက အဖေ သမီးကို ကတိပေးတယ်၊ အဖေ့ဘဝရဲ့ ကျန်တဲ့သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ သမီးကို ချစ်ပေးပြီး ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးမယ် ဆိုတဲ့ ချိုမြိန်သော စကားလုံးတွေကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၃။ Tim McGraw
Country ဂီတစူပါစတားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Tim McGraw မှာ သမီးရှိပြီး သားတစ်ဦးမှမရှိသေးတဲ့ သမီးတွေရဲ့ အဖေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရာအတွက်လည်း သူဟာ အတော်လေးပျော်ရွှင်နေပုံပါပဲ။ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ အိမ်မှာ ပျော်နေရတဲ့အကြောင်းကို အဆိုတော်က သူတို့က ကျွန်တော့်ကို ဒီလိုပိုကောင်းတဲ့ ယောင်္ကျားဖြစ်အောင် လုပ်ပေးခဲ့တာပါ။ သူတို့က ကျွန်တော့်ကို တစ်ခြားနည်းနဲ့ မြင်နိုင်အောင် လုပ်ပေးကြပါတယ်။ ယောင်္ကျားကောင်းဖြစ်ရခြင်းအကြောင်း၊ ဘဝတွေအကြောင်း သူတို့တွေဆီကပဲ ကျွန်တော် သင်ယူနေခဲ့ရတာပါ။
၄။ Jamie Foxx
အသက် ၅၄ နှစ်အရွယ် မင်းသားကြီးက ၎င်းရဲ့ သမီး ၂ ဦးကို ၎င်းတစ်ဦးတည်းပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့ပြီး အချိန်နဲ့အမျှ ကောင်းမွန်သော ဖခင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာစေဖို့ သင်ယူနေသူဖြစ်ပါတယ်။ သူသင်ယူခဲ့တဲ့ အဓိကသင်ခန်းစာတွေထဲက တစ်ခုကတော့ သမီးဖြစ်သူတွေကို ဦးစားပေးပြီး သူတို့အတွက် အမြဲရှိနေပေးဖို့ပါပဲ။
၅။ Thomas Rhett
Country ဂီတ အဆိုတော်နှင့် သီချင်းရေးဆရာ Thomas Rhett ဟာလည်း သမီးလေးဦးရှိပြီး အကြီးဆုံးသမီးက မွေးစားသမီးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ သမီးလေးတွေက သူ့နှလုံးသားတွေကို နေ့တိုင်း အရည်ပျော်စေတယ်လို့ ဝန်ခံခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကလေးအဖေဖြစ်ခြင်းက ကျွန်တော့်စိတ်နှလုံးကို ပျော့ပျောင်းစေပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျွန်တော့်ကို ပိုပြီးတော့တောင် စိတ်ရှည်စေပါတယ်။
၆။ Jimmy Fallon
ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်တင်ဆက်သူနှင့် ဟာသသရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Jimmy Fallon ကလည်း သမီးမိန်းကလေး နှစ်ယောက်ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်ပြီး ကလေးအတွက်ဆိုရင် အတော်လေးနူးညံ့သိမ့်မွေ့သော ယောင်္ကျားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အခက်ထန်ဆုံးယောင်္ကျားတွေတောင် သမီးတွေရလာတဲ့အခါ နူးညံ့ပျော့ပျောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ ဝန်ခံခဲ့ပြီး အဖေတွေက သူတို့သမီးငယ်လေးတွေကို ချက်ချင်းချစ်သွားကြပြီး အရာအားလုံးကို စွန့်လွှတ်နိုင်သူတွေဖြစ်လာကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အမေတွေက သမီးနဲ့ပတ်သက်လာရင် စည်းကမ်းရှိဖို့ လိုအပ်လိမ့်မယ်လို့လည်း ပြောကြားဖူးပါတယ်။
၇။ Chris Hemsworth
ဩစတြေးလျမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်သူမှာလည်း အမြွှာယောင်္ကျားလေးတွေနှင့် သမီးလေးတစ်ဦးတို့ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။ India က Chris ရဲ့ အကြီးဆုံးသားဖြစ်ပြီး ကျွန်တော့်သားက ကျွန်တော်ကြုံဖူးသမျှထဲမှာ အကြီးကျယ်ဆုံးအရာပဲ ဟု ပြောခဲ့သလို သမီးဖြစ်သူကတော့ သူ့ဘဝရဲ့ အဓိကအာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်အလုပ်ရောက်နေတဲ့အခါ သမီးအကြောင်း တွေးနေဖြစ်တယ်၊ အလုပ်မရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ သမီးနဲ့အတူ အချိန်ဖြုန်းဖြစ်တာပေါ့။
Previous articleကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွင်း အကောင်းဆုံးနှိပ်နယ်နည်း (၄)မျိုး
Next articleကိုယ်ဝန်ဆောင်သုံးလပတ်အလိုက် သင့်လျော်သော အိပ်စက်ခြင်းအနေအထားများ
သူတို့ကိုယ်ဝန်ကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ဖက်ရှင်ကျကျထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သော အနုပညာရှင် (၁၆) ယောက်
ဒီနှစ်အတွင်းမှာပဲ သူတို့ရဲ့ ဘေဘီလေးတွေကို ကြိုဆိုကြမယ် အောင်မြင်ကျော်ကြားသူများ
တစ်ခြားညီအစ်မတွေနဲ့ မတူညီဘဲ ကွဲပြားခြားနားသော Kylie ရဲ့ မိဘအုပ်ထိန်းမှုပုံစံ (၈)မျိုး
မှော်စွမ်းအားကို ပိုင်ဆိုင်ထားသော ကလေးတစ်ယောက်မှာသာရှိသော လက္ခဏာ (၆) ခု
မေမေတို့ကလေးရဲ့ အနံ့ဟာ အာရုံခံစားမှုဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုတစ်ခုဆိုတာ သိပြီးပြီလား?
ကလေးငယ်တွေအတွက် သိထားသင့်တဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအရည်အချင်းများ
မိဘတွေအနေနဲ့ သတိမထားမိဘဲ ကလေးတွေပေါ်မှာ ထိခိုက်နစ်နာစေမိသော အရာများ
မိဘတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ သားယောကျ်ားလေးတွေရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှု အဆင့် (၃)ဆင့်
Mom and Baby229
Chit MayMay was established in 2018 which provides information mainly about parenting andavariety of topics including Child Care, Child Nutrition, Parents Guide, Mom & Baby, etc. Relating to Myanmar which is balanced, timely, and accurate for Burmese audiences.
ကလေးရဲ့ ဉာဏ်ရည်ကို မြင့်တင်ပေးဖို့ Offline ဖန်တီးလှုပ်ရှားမှုများ
Nyein Thu - May 27, 2022 0